Indlu Yamaplanga eBliss Acres, Ukwamkela abantu bonke, izilwanyana zasekhaya - I-Airbnb
Indlu Yamaplanga eBliss Acres, Ukwamkela abantu bonke, izilwanyana zasekhaya
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguDebbie
Indlu yamaplanga yindawo oya kuyo yokumamela iintaka, ubukele isibhakabhaka sasebusuku, ulale iifestile zakho zivulekile, ungqengqe kwibhafu yakho enamanzi ashushu yabucala, uqubhe kwipuli yobunewunewu okanye uhlale ecaleni komngxuma womlilo, ungcamle imilenze. I-Bliss Acres yindawo ebiyelweyo eyi-5 enamabala amahle, igadi encinci, iindawo ezinengca, igadi eyimfihlo phakathi kwemithi ye-redwood, ukucamngca okanye i-yoga kumgangatho wokucingisisa, okanye ucinge ngobomi kumgangatho wokujonga ngoxa uhleli phantsi kweWon-a-peli, i-okhi entle. Ifanele abantwana/isilwanyana sasekhaya. I- $ 25 ngesilwanyana sasekhaya.
Indlu Yamaplanga eBliss Acres yindawo encinci, igumbi lokulala elahlukileyo, ebekwe kwiigadi ezintle phakathi ehlathini. Indawo ibiyelwe ngee-acre eziyi-5, inama-acre ayi-6 amahlathi ngaphandle kwendawo ebiyelweyo.
Kunzima ukuchaza iBiss Acres; kubonakala ngathi umntu kufuneka azibonele ngokwakhe. Ixesha ngalinye lonyaka linobuhle balo obukhethekileyo kwaye iigadi zisoloko zinezinto ezikhulayo. Ngebhafu yakho enamanzi ashushu yabucala (abantu abadala kuphela, akukho mntwana ungaphantsi kweminyaka eyi-12 ngenxa yezizathu zabo zempilo), iindwendwe ziyamenywa ukuba zisebenzise ipuli esetyenziswa nangabanye abantu kungekhona umnikazi wayo kuphela kodwa enye iyunithi ye-AirBnB esendlini. Ithivi yi-DVD/i-Blu Ray kuphela. Akukho fowuni ifumanekayo. I-wifi icotha, ayikulungelanga ukubukela kwi-intanethi kodwa yanele kwi-imeyile nakumyalezo.
Kukho iindawo ezintathu zokuhlala kule ndlu: indlu enkulu (eyethu), Indlu Yamaplanga, kunye nendlu enevaranda. Indlu yamaplanga kunye nendlu enevaranda zombini ziiyunithi ze-AirBnB. Indawo nganye yokuhlala yahlukaniswe malunga ne-75 feet.
Sineenja ezintathu kule ndlu: UWinnie yinja yaseBernese Mountain/collie kunye nematrasi. U-Lilian yinja engumxube/waseOstreliya, ilungu lethu elitsha lentsapho elingayifundiyo yonke imithetho kwaye lizama ukuphuma egeyithini kuwo onke amathuba. Ungummeli kaBiss Acres ibe uyabathanda wonke umntu nenja nganye. Uyakuthanda nokufuduka izihlangu zakho ngoko zigcine zisondele! Kodwa akazukuzihlafuna. I-Chewbacca yindawo ephithizelayo kwaye ayifudumezi kubantu okanye ezinye izinja. Ulandela umkhokeli kaWinnie noLilian.
Siyazithanda izilwanyana zasekhaya kodwa ngenxa yokulwa inja enamandla, izinja zam ziyazilibazisa ezinye izinja. Ngoko ke ndicela inja(izinja) yakho ukuba ihlale phandle ngalo lonke ixesha ngaphandle kwamalungiselelo xa ndifaka izinja zam ngaphakathi, emva koko inja (izinja) yakho ikhululekile ukuba ihambe nawe ngaphandle ingenanto yakwenza nokuvuza. Ngoxa inja yakho ingasebenzi, enkosi ngokuba phandle nabo. Ndicela ukuba usebenzise ishiti okanye ingubo ukuze ufake ifenitshala ukuba isilwanyana sakho singena kwifenitshala. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga ebhedini. Enkosi ngokucoca emva kwesilwanyana sakho sasekhaya. Kukho imali eyi- $ 25 emele ibhatalwe kwisilwanyana ngasinye sasekhaya.
Lixesha le-mosquitos ngoku kwaye badla qho emva kwemini/ngokuhlwa nasekuseni.
Indawo yomngxuma womlilo, inyama eyojiweyo, indawo yokucamngca, indawo yokujonga, kunye nepuli ziindawo eziqhelekileyo, zisetyenziswa nangabanye abatyeleli abahlala kwindlu enevaranda. Asisebenzisi naziphi na iindawo zangaphandle ngaphandle kwepuli xa iindwendwe zikhona.
4.99 · Izimvo eziyi-92
I-Bliss Acres ikumgama weemayile eziyi-5 ukusuka e-Hwywagen, iimayile eziyi-13 ukusuka e-Weaverville (imizuzu eyi-25 xa uqhuba). Imayile yokugqibela ye-Dutch Creek Road yindlela enye ngoko kufuneka ukhathalele. Kukho iindawo ezimbini zokungena eBiss Acres: le uza kuyisebenzisa ngumnyango wesibini. Uphawu oluthi "Bliss Acres" kwindlela emalunga ne-200 feet ngaphambi kokungena kwakho, engena esangweni kunye neentlanzi ezimbini. Uza kubona i-5511 kumthi we-madrone phambi kwegeyithi. a
Kukho izilwanyana zasendle ezininzi kunye nevumba le-cedars kunye neepines, kwaye indlu iya kwiTrinity River emangalisayo, kodwa ayifumaneki ngelo xesha. Ukufikelela emlanjeni kufuna ukuba uqhube imayela ukuya kwindlela eya e-Evan 's Bar Road uze emva koko uye emlanjeni.
I-Chagdud Gonpa Foundation igcina ubugcisa, ifilosofi, kunye neendlela zokucingisisa zesikolo saseNyingma soBuddha saseTibetan kwimizuzu nje elishumi kude. Iivenkile zekofu ezinembali ezikufutshane neWeaverville ezinembali kunye neevenkile zokutyela zasekuhlaleni. Intlanzi kwiTrinity River kunye neLewidge Lake. Ichibi elihle leTrinity likumgama wemizuzu eyi-45. Iindlela zokunyuka intaba ezigcinwe zikumgama wemizuzu eyi-30, iCanyon Creek Trailhead kunye namachibi. IBliss Acres ikwimizuzu eyi-25 ukusuka eWeaverville kwaye ikwihlathi.
Ndiyakuthanda ukutyelela neendwendwe kakhulu kodwa ndiyaqonda nokuba eli lixesha lakho lokuphumla nokuphumla. Ndidla ngokungabonakali kakuhle, ndisebenzisa ipuli kuphela xa iindwendwe zingayisebenzisi (nangona nonyana wam onguDown Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down Down ehlala echibini; uyazithanda kakhulu iindwendwe njengokuba ndisenza), ibe ngokuyintloko ndidibana xa ndimenywa.
Ndiyakuthanda ukutyelela neendwendwe kakhulu kodwa ndiyaqonda nokuba eli lixesha lakho lokuphumla nokuphumla. Ndidla ngokungabonakali kakuhle, ndisebenzisa ipuli kuphela xa iindwe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Junction City